results - Synonyms of results | Antonyms of results | Definition of results | Example of results | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for results
Top 30 analogous words or synonyms for results
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း အထက်ပါပုံကိုကြည့်ပါက Exploration Results ကို Mineral Resources နှင့် Mineral Reserves တို့ အထက်တွင်
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း သတ္တုရိုင်းသိုက်၏ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပိုမိုမှန်မှန်ကန်ကန် သိလာသည်နှင့်အမှျ Exploration Results များသည် Mineral Resources အဆင့်များသို့ အဆင့်ဆင့်ခွဲထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
စာရင်းအင်း ပညာ (ဃ) တွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေပြု၍ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ခြင်းနှင့် ကောက်ချက်ချခြင်း (Interpretation and generalization of the results) တို့ဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် In 2012, Microsoft hiredapolitical pollster named Mark Penn, whom the New York Times called "famous for bulldozing" his political opponents as Executive Vice-President, Advertising and Strategy. Penn createdaseries of negative ads targeting one of Microsoft's chief competitors, Google. The ads, called "Scroogled", attempt to make the case that Google is "screwing" consumers with search results rigged to favor Google's paid advertisers, that Gmail violates the privacy of its users to place ad results related to the content of their emails and shopping results which favor Google products. Tech publications like Tech Crunch have been highly critical of the ad campaign, while Google employees have embraced it.
Yahoo! BOSS ၁။ ။ Ability to re-rank and blend results ----- Search Result တွေရဲ့ အစဉ်အလိုက်ကို ကိုယ်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လိုက်ဖက်မှု အလိုက်၊ Content တွေကို ထည့်ပြီး ပြုပြင် နိုင်ပါတယ်။
ဟေလီယိုစဖီးယား A proposed model hypothesizes that the heliosheath is shaped like the coma ofacomet, and trails several times that distance in the direction opposite to the Sun's path through space. At its windward side, its thickness is estimated to be between 10 and 100 AU. However, scientific results in 2009 showed that model may be incorrect.
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာသတ္တုတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတော့ သတ္တုရိုင်း သိုက်ပမာဏကို စီးပွားရေးရှုထောင့်အရပဲ အဆင့်အတန်းခွဲခြားကြပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ခွဲခြားပုံချင်းမတူပါ။ သိပ်သိသိသာသာကြီးကွဲ တာမျိုးတော့လည်း မဟုတ်ပါ။ ဩစတြေးလျ (Australia)၊ ကနေဒါ (Canada)၊ တောင်အာဖရိက (South Africa)၊ ဥရောပ (Europe)၊ အမေရိက (United States of America)၊ ချီလီ (Chile)၊ ရုရှား (Russia) စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ သူ့စနစ်နဲ့ သူရှိကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံးကတော့ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ (JORC = Joint Ore Reserves Committee) က ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များ (Exploration Results)၊ သတ္တုရိုင်းသိုက်ပမာဏ (Mineral
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ After these deadly results, British intelligence leaked falsified information implying that the rockets were over-shooting their London target by 10 to 20 miles. This tactic worked and for the remainder of the war most landed in Kent due to erroneous recalibration.